Amniga Galmudug oo faraha ka baxay | KEYDMEDIA ONLINE
Amniga Galmudug oo faraha ka baxay
Wararka ka amaanaya Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in Madaxweynha Maamulka Galmudug uu u sheegay odayaasha dhaqanka inuu faraha ka baxay aminiga degaanada Galmudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Kulan u-jeedooyin badan laga lahaa oo dhex maray Odayaasha iyo Madaxda Galmudug, ayuu Qoor-Qoor ka sheegay in Kooxda Al-Shabaab ay qarka u saran tahay inay la wareegto Dhuusamareeb.
Madaxweyne Qoor-Qoor, wuxuu sheegay in gobolada Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan ay Al-Shabaab soo buux dhaafiyeen, maamulkiisuna lahayn awood ay ku wajahaan.
Saddexdi bil ee la soo dhaafay Al-Shabaab waxa ay laba jibbaareen howl-gallada amni darro oo ay ka fulinyaan degaanada Galmudug.
Isniintii ayay ahayd markii ay jid gooyo dhigteen halka loo yaqaan Siinka-dheer oo ah afaaf-ka hore ee laga soo galo Dhuusamareeb.
Degaanno ay ka mid yihiin Bacadweyn, Shabelow Cimaamad, Ceeldheere, Il-guulle iyo kuwo kale ayay Al-Shabaab dowr mar la wareegeen maalmo gudohood, qeybo ka mid ah degaanadaas ayayna kula dagalaameen dad shacab ah.
Odayaasha oo ka carooday hadalka Qoor-Qoor, ayaa sheegay in doorashadiisii ka hor aysan Al-Shabaab ka sokeyn degaanka Wabxo, wax la aqbali karana aysan ahayn halka uu hadda marayo amniga Dhuusamareeb iyo guud ahaan Galmudug.
Tan iyo markii la doortay Qoor-Qoor wuxuu ku mashquulsanaa howlo aan quseyn iyo u adeegidda Farmaajo iyo Fahad Yaasiin.